Daaweynta cagaarshow B: waxa aad u baahan tahay inaad ogaato. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD • SAYNISKA Daaweynta cagaarshow B: waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
Cagaarshowga B ee "fudud" waa mid lama daaweyn karo. Cagaarshowga Fulminant wuxuu u baahan yahay isu tallaalidda. Ujeedada daaweynta cagaarshowga B ee joogtada ah waa in la xakameeyo taranka fayraska, haddii ay suurtagal tahay ka hor inta aan la gaarin marxaladda cirrhosis. Kaliya marxaladda soo noqnoqashada waxay u qalantaa daaweyn gaar ah.
Ujeedada daaweyntu waa in la tirtiro fayraska, sidaas awgeed HBs agagaarkeeda oo ka soo horjeeda anti-HBs antibody, laakiin marar dhif ah ayaa la gaari karaa. Sidaa daraadeed waxaan isku dayeynaa inaan joojino fayraska fayraska si loo yareeyo hawsha cagaarshowga daba-dheer iyo dedejinta ku-meel-gaadhka marxaladda hawsha aan firfircooneyn ee fayraska. Seroconversion HBe (waayitaanka HBeAg iyo muuqaalka anti-HBe antibody) waa shey muhiim ah, laakiin mararka qaarkood ayaa dhacda waqti dambe. Daawooyin dhowr ah ayaa loo isticmaalaa.
Tallaalka interferon (IFN) waa kan ugu horreeya ee liddi ku ah fayruska, wuxuu joojiyaa DNA-da fayruska waxana uu kiciyaa unugyada antiviral. Sidoo kale waa tallaalka, wuxuu kordhiyaa waxqabadka unugyada qaarkood ee habka difaaca jirka. Tallaalka fayruska ee daaweynta waxaa lagu xaqiijinayaa hoos u dhaca xaddiga fayruuska ee usbuuca ugu horeeya. Ficil-celinta tallaalka jirka lafteedu waxay badanaa keentaa kororka taranka (caadi ahaan bilaha 2). Tani waxay muujinaysaa kororka jawaab celinta difaaca waxayna kordhineysaa fursadaha lagu tirtirayo fayraska. Marxaladdan, waxaa laga yaabaa in kor u kaca ah ee joogtada ah ee xanuunka iyo necrosis, sababtoo ah ka takhalusidda unugyada beerka ee cudurka qaba. Marka daaweyntu ay shaqeyso, marxaladu caadi ahaan waxay caadi u tahay dhawr bilood ka dib iyo xaaladda beerka ay hagaajinayso. Hufnaanta waxaa lagu xaqiijiyay joojinta HBeAg iyo muuqaalka difaaca anti-HBe. In muddo dheer, daawo dhamaystiran xaqiijiyay seroconversion xiga ee HBsAg leh muuqaalka kore ee unugyada anti-HBs waxaa mararka qaarkood laga heli, waxaa lagu hagaajin karaa by daaweyn dheer. Daaweyntu waxay waxtar badan tahay inta lagu jiro muddada difaaca jirka. IFN ayaa markaa ka jawaabeysa 50% kiisaska. Dhinaca kale, marxaladda dul-qaadka dul-qaadka, daaweynta ma aha mid aad waxtar u leh. Si ka duwan daawooyinka kale ee loo isticmaalo, IFN waxay leedahay faa'iido ay leedahay in la maamulo mudo gaaban, ma aha in ay keenaan iska caabin iyo, marka ay wax ku ool u tahay, inay soo saaraan seroconversion daba dheeraaday 80 90% bukaanada. Dhibaatada ugu weyni waxay ku xiran tahay dulqaadka, saameynta daawadu waa muhiim. 20% kiisaska, waa lagama maarmaan in la yareeyo qiyaasta, 5% kiisaska, mid ayaa joojiya daaweynta. Waxaa intaa dheer, IFN-du waxay si rasmi ah u horjoogsaneysaa kiisaska tiro badan (xaddidid cirrosis, cudurada maskaxda, iwm.).
Markii hore, kaliya heerka IFN waxaa la siiyaa cagaarshowga B ee joogtada ah, hadda waa la kala doorbiday IFN. Si sahlan loo isticmaalo, waa wax tayo badan waxayna kordhineysaa fursadaha HBe seroconversion (37% oo leh IFN midab leh 25% oo leh heerka IFN).
Lamivudine (ama Zeffix® Epivir® for coinfected HIV) waa fayruska ugu horeysay in ay la soo jeediyay ay badal u tahay dartid. Waxay ku jirtaa qaab kiniin ah waxayna leedahay faa'iidooyin badan oo ku saabsan IFN. Saameynta fayrasku waa mid degdeg ah (caadeysiga transit, dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca cagaarshow iyo fibrosis) iyo dulqaadkiisu waa fiicanyahay. Si kastaba ha noqotee, marka la joojiyo daaweynta, dib u soo noqoshada cagaarshowgu waxay ku dhowdahay joogitaanka maqnaanshaha HBe seroconversion. Fursadaha HBe seroconversion waa hooseeya: 20% sanad kadib. Haddii daaweyntu ay sii dheeraato rajada ah in lagu gaaro seroconversion, khatarta ah inay ku dhacdo noocyo u adkaysta fayruska oo la xiriira dib u soo noqoshada ayaa sii kordha. Inta jeer ee muuqaalka ah ee HBV u adkaysta waa 24% muddo hal sano ah ee daaweynta ka dib, ayay soo fuulaa, si 38% ka dib markii 2 sano 50% ka dib markii 3 sano 67% ka dib markii 4 sano.
Marka antibiyootika HBe uu ka baxo daawada anti-HBe antibody, daaweynta 3 ayaa la sii wadi doonaa ugu yaraan 6 bilood si loo yareeyo khatarta ah in wax laga qabto. Xilliga maqnaanshaha cudurka HBe, waxaa lagugula talinayaa inaad sii wadato daaweynta illaa inta uusan jirin caabuq fayras ah. Haddii ay ka soo horjeesato, waxaa suurtogal ah in loo badalo adefovir, ixtiraamaya muddad ka mid ah wareegyada 3.
Adefovir dipivoxil (Hepsera®) waa qaab kiniinno ah. HBe seroconversion adipovir dipivoxil waa wax aan fiicnayn, 12 kaliya. Waxa ay keenaysaa, in kala badh kiisaska, caadi ah transas iyo horumarinta gobolka ee beerka iyo waa mid aad u fiican loo dulqaatay. Sidaas awgeed ayaa loo qori karaa muddo dheer sababtoo ah waxay keenaysaa iska caabin yar. Kadib hal sano oo daaweyn ah, ma jiro wax mutacal ah oo la adkeeyay. 2 sano ka dib, waxaa jira cillad ka jirta 6 boqolkiiba kiisaska, saddex sano kadib: 11%. Shan sano ka dib, qiimaha waa 28%. Waa wax ku ool ah oo ka dhan fayraska lamivudine u adkaysta iyo waxaa loo isticmaali karaa si ay u bedeli lacala fayrusyada mutant u adkaysta. Muddada daaweynta laguma xaqiijin. Haddii seroconversion HBeAg, waxaa lagu talinayaa in ay sii wadaan daaweyn ugu bilood 3 6 yaraadaan halista ah ee reactivation joojiyay. Maqnaanshaha qaaxada HBe, ama xaalad cagaarshowga xun ee HBeAg, waxaa lagu talinayaa in la sii wado daaweynta sababtoo ah haddii uu dhaco joojinta, waxaa jira dib u laabasho.
Horay loo oggolaaday Mareykanka, entacavir (Baraclude®) wuxuu helay Ruqsadda Gaadiidka Yurub iyo in lagu dhejiyo Suuqa Faransiiska dhammaadka 2006. Qaddarkeedu waa hal kiniin ah maalin kasta, dulqaadkuna waa mid wanaagsan (wax saameyn ah oo aan ku dhicin). Waxtar ka badan lamivudine ama adefovir, waxa si xun u saameeya xaddiga fayraska ee 90% kiisaska. Si kastaba ha ahaatee, seroconversion HBe wuxuu kaliya ku dhacaa tiro yar oo kiisas ah (iyo, marka laga reebo, HBs seroconversion) waana in daaweyntu sii dheeraato. Sida adefovir, entecavir waxay wax ku ool u tahay fayraska cagaarshowga B ee lamivudine-ka ah laakiin waa in loo isticmaalo qadar sare.
Marka marxaladda lagu bilaabayo daaweynta
Daaweyntu waxay ka waxtar badan tahay inta lagu jiro muddada difaaca jirka (fareebka dhexdhexaad ah, dhererka sare iyo calaamadaha dhaqdhaqaaqa). Waxa la ogaaday in, marka daawada la billaabo at muddo chronic hepatitis B reactivation, ee u qalmay jawaab hore waa weyn (jeer 3,5 dheeraad ah, celcelis ahaan), in markii ay wuxuu bilaabmaa xilliga gaaban. Jawaabta hore waxaa loo tixgeliyaa inay tahay arrin muhiim u ah guusha mudada dheer ee daaweynta.
Waqtiga ugu habboon si ay u bilaabaan daaweynta waxaa lagu qeexi kara a load dhexdhexaad ah viral (in ka yar 10 million koobi HBV DNA), transas kacsantahay (ALT) ka badan 100 iyo fibrosis dhexdhexaad ah ama daran (A2 ama A3) weyn.
Cagaarshowga B ee joogtada ah ee fayruuska mutan
Iyadoo la eegayo heerka IFN, khubarada ayaa kugula talinaya in lagu daaweeyo cagaarshow B (HBeAg negative) muddo ka badan hal sano halkii lix bilood ah. Interferon pegylated aan si rasmi ah loo qiimeeyay muddo ah hal sano ah, sidaas darteed tani waa xilliga tixraaca rasmiga ah. Daawooyinka kale, ha noqotee ama ha noqotaan antibakteriyaka HBe wuu fiican yahay bilawga daaweyntu ma beddelayso gawaarida. Iyadoo lamivudine, adefovir ama entekavir, natiijooyinka iyo heerarka iska-caabbintu waxay la mid yihiin cagaarshowga B ee joogtada ah ee leh astaamo ama HBe antigen
Waa wax aan faa'iido lahayn in la sii wado daaweynta abuuraysa fayraska u adkaysta mutantiyada. Waa inaad bedesho daawadaada maxaa yeelay hepatitis waxay u badan tahay inay soo noqoto. Calaamadaha caabbinta fayrasta waxaa lagu qeexay kororka xaddiga 10 ee xaddiga fayraska xaddiga fayruuska ugu hooseeya ee la helay intii lagu jiray daaweynta. Waxaa la tixgeliyaa in culeyska mutateey uu noqday mid madax banaan iyo in saamiga hepatocytes uu ku dhaco cadaadiskan ayaa noqday mid muhiim ah. Resistance waxaa laga yaabaa inay si gaar ah u dhacdo haddii galka fayruska la ogaado. Aad bay u yartahay marka culeyska fayruusku uu yahay mid aan la garan karin, sababtoo ah haddii isku dhufashada fayraska la xannibo, ma beddeli karo. Marka la fiiriyo fayraska, waxaa la arki karaa in caabbintu ay sabab u tahay soo ifbaxidda muruqa mutawacaanka ah. Cadaadiskan waxaa la ogaan karaa xitaa kahor intaan la bilaabin fayrasku. Waxaa jira mudo ah saddex illaa lix bilood inta lagu guda jiro noocyada mutate mutates, halka fayraska fayruuska aan weli la kordhin. Macluumaadkan ayaa faa'iido leh si loo xakameeyo is-beddelka cadaadiska adkaysi leh iyo ka hortagga khatarta ah inuu sii xumeeyo xanuunka cagaarshow. Marka caabbinta lagu muujiyo inta lagu jiro daaweynta lamivudine iyo adefovir ayaa loo isticmaalaa, labada daweyn ayaa laqabatimay ugu yaraan saddex bilood halka adefovir ay waxtar u leedahay. . Laakiin marka uu cudurku aad u daran yahay (oo leh marxalad F1 ama F3 fibrosis), waxaa lagula talinayaa in la sii wado daaweyn labadaba aan si cad loo sii socon.
Entecavir waxay sidoo kale waxtar u tahay ciladaha lamivudine, laakiin waa wax yar oo waxtar leh, waana in loo isticmaalo qiyaasta sare. Waxtarkeeda, haddii ay ka soo horjeeda adefovir, weli waa la bartay.
Dhawaanahan ayaa la heli karaa
Daawooyinka cusub ee lagu qiimeeyo waa:
emtricitabine (Emtriva®), ayaa ku dhow inay lamivudine, iyo sidoo kale wax ku ool ah ee daaweynta ee caabuqa HIV, laakiin kuwaas oo waxtarka aanu run ahaantii ma u muuqdaan kuwo ka xoogbadan, lamivudine ama adefovir;
Tenofovir (Viréad®), ayaa sidoo kale loo isticmaalay HIV, oo u dhow adefovir, waxay noqon kartaa mid waxtarkeedu ka fiicnaado tan dambe, iyada oo xitaa iska caabin la'aan;
telbivudine, kuwaas oo waxbarashada hore soo jeedin ka waxtar badan lamivudine, sidoo kale marka la eego caadi ah transaminases ama hoos u dhac ku load viral, tijaabooyin joogto ah oo dheeraad ah ayaa qeexi doona ay waxtarka iyo inta jeer ee iska caabin ah;
Clévudine, oo u muuqda in uu yahay mid wax ku ool ah oo yareynaya culeyska fayraska leh ee dulqaad leh, hase yeeshee daraasaduhu aad ayay u sarreeyaan marka loo eego telbivudin.
Inkastoo daawooyinka fayruska loo isticmaalo monotherapy aadan haysan waxtarka aad u xoogbadan, in daaweyn hadda, helitaanka ogolaan horumarinta dabiibka badan loogu talo galay bukaan kasta, iyo ka hortagga doonaa ah ee iska caabin ah. waddo kale oo cilmi-baaris la xidhiidho dagaalka ka dhanka ah fayraska, laakiin siyaabo si loo xakameeyo horumarinta fibrosis beerka (eeg article on buukaannada Jds No. 187).
Ugu dambeyntii, cilmi baarayaashu waxay bartaan daaweynta tallaalka. Tan waxaa keenaya jawaabta difaaca jirka bukaanka qaba cagaarshowga B ee joogtada by tallaalka fayruska this, taas oo in aragtida labada dardar yaabaa jawaab dabiiciga ah (oo seroconversion) ama hagaajin jawaabayo daaweynta. Daweynta tallaalka kama shaqeyneyso tallaalka hadda. "Supervaccins", oo si gaar ah loogu talagalay ujeedadaas, waxay u muuqataa mid ballaadhan.
Isku-qaadsiinta fayraska cagaarshowga C
Markii ay labada fayrusyada joogaan ee jirka ku jira, inta badan hepatitis C qaadataa in ka badan hepatitis B. taranka ugu horreeyey waa kan sare iyo kan labaad ee ugu yar tahay. Xaaladdan oo kale, loola dhaqmo coinfection HBV / HCV sida loola dhaqmo hepatitis C chronic, by isku pegylated interferon in daroogada kale, ribavirin. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan feejignaadaan, iyo la socodka horumar ee hepatitis B. In fact, baabi'inta hepatitis C ee Habka aan halis is-celinta sida hepatitis B, iyo sidaas reactivate hepatitis chronic B. Marar dhif ah, waxay lid ku dhacaya iyo taranka HBV taliso leh xoog halka HCV weli caqli leh taranka yar yahay. Ka dibna loola dhaqmo sida coinfection la hepatitis B, fadilaad ah pegylated interferon, tan iyo markii ay sidoo kale waa wax ku ool ka dhanka ah hepatitis C (oo aan ahayn in ay dhacdo lamivudine, adefovir ama jahawareer).
Ku saabsan 10 boqolkiiba sidayaasha HIV-ga waxay qabaan HBV. Iyadoo ay soo ifbaxday daaweynta multidrug ee AIDS-ka, dad badan ayaa ku guuleystey in ay xasiliyaan infekshankooda HIV, halka cagaarshow uu sii korayo. Dad badan oo la duubay ayaa si halis ah ugu hanjabay HBV marka loo eego HIV. Daaweynta cagaarshow B waxaa lagu samayn karaa bukaanka la karkariyay kuwaas oo xaaladooda difaaca jirka lagu hayo daaweynta antiretroviral. Kuwa ay habka difaaca jidhku aad u niyadjabsan yihiin, daaweynta antiretroviral ee HIV waa inay ahaataa, ka hor inta aaney kor u qaadin heerka CD4. Daaweynta interferon waa suurtogal, laakiin waxtar ma laha marka laga reebo maqnaanshaha cudurka. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka wanaagsan ayaa la heli karaa, dhibaatada ugu weyni waxay tahay in la helo isu dheelitirka u dhexeeya dulqaad iyo waxtar.
Caabuqa HIV wuxuu sii kordhiyaa khatarta ah inuu sii wado khatarta HBV, dabeecada fayruuska B iyo inta jeer ee fayruska B ka soo baxo ee mas'uul ka ah dillaaca cagaarshow. Waxay xoojinaysaa horumarinta fibrosis waxayna kordhisaa dhimashada. Hordhaca daaweynta cudurka dabiiciga ah ee HIV-ga ayaa keentay in wax-qabad aad u daran ay sabab u tahay soo celinta difaaca jirka. Isla sidaas oo kale waa in la joojiyo ama lagu beddelo dawooyinka anti-retroviral ee ka hortagga HBV, oo ay ku jiraan lamivudine.
tusmo ee daaweynta anti-HBV ku xiran tahay joogitaanka HBsAg, HBeAg / anti-HBe Ab iyo HBV load viral muujiyey sida ay baaritaan taranta xasaasi ah. Marka daaweynta antiretroviral HIV waxaa lagu tilmaamay, waa in ay leeyihiin urur firfircoon ka dhanka ah HBV, lamivudine (Epivir®) ama emtricitabine (Emtriva®) + tenofovir (Viread). Bukaanada horey loogu daaweeyay lamivudine oo fayraskuna uu u adkeysanayo sheygan, waa in lagu beddelo tobanofovir. Marka daaweynta antiretrovoviral-ka ee lagama maarmaanka u ah, tilmaamidda daaweynta HBV waxay kuxirantahay xaalada beerka.
Kaliya dadka bukaanka ah ee dhibcaha fibro-bus waa F2 ayaa la daweynayaa. Marka heerka of limfosaytis CD4 waa la ilaashaa, daaweynta waxaa laga yaabaa in interferon, pegylated interferon ama adefovir. Marka heerka uu ka yar yahay CD4 limfosaytis 500, daaweynta anti-HBV waa in ay ahaataa isku-dar ah lamivudine ama tenofovir + emtricitabine. ANRS The baadhitaan pilot multicentre (ANRS HB 01 EMVIPEG) qiimeeyo waxtarka iyo dulqaad daaweynta daro ah la pegylated dartid-Alfa 2a isku dhafan oo tenofovir iyo emtricitabine, daaweynta cagaarshowga B ee joogtada ah HBe antigen ee bukaanada qaba HIV / HBV.
Si loola socdo waxtarka daaweynta, tilmaamo badan ayaa faa'iido leh. Ugu horreyn, waa inaad qaadataa bil walba bilowga daaweynta, kadib saddexdii biloodba mar. Qiyaasta xaddiga fayruska waa mid sax ah, waa la sameyn karaa saddexdii biloodba mar, ama ka badan hadduu jiro siroosh. Marka ay tahay cagaarshowga xasaasiga ah ee ag-HBe, waxaa muhiim ah in la garto xakamaynta seroconversion. Tani waa sababta waxaa lagu talinayaa in la raadiyo antigen iyo anti-HBe, markii DNA ah viral ayaa hoos u soo maratay in mar labaad, haddii HBV DNA iyo HBeAg yihiin Xanuunka, seroconversion HBs waa in si la mid ah loola socdo.
Korjoogteynta dhibaatooyinka laxiriira badanaa waxay la xiriiraan IFN: baaritaannada joogtada ah ee dhiigga (NFS, TSH, iwm.). Ugu dambeyntii, muuqaalka kore ee cadaadisku wuxuu keeni karaa koror dheeraad ah oo ah fayruska. Kadib joojinta daaweynta, ilaalinta calaamadaha bayoolojiga iyo fayruusyada ayaa la sii wadi doonaa sababtoo ah halista fayruska.
Ma jiro "jawaab sax ah" oo lagu daaweyn karo cagaarshow B, laakiin dhowr nooc oo jawaab ah, oo ku habboon marxalado isdaba socda:
Waqtiga 1er, culeyska fayruusku hoos ayuu u dhacaa, waxaana rajeynayaa, inuu hoos u dhaco naqshadda xNUMX 100 halkii ml. Jawaabtan fayraska ah waxaa la socda ama la socotaa caadiyan ah taramadaha iyo hoos u dhaca hawsha cagaarshow, ama xitaa dhibcaha fibrosis. Marxaladdan, khatarta ah in dib u soo noqoshadu sii socoto;
Waqtiga 2e, seroconversion HBe ayaa dhacaya waxayna halis u tahay in fal-celinta ay hoos u dhacdo. Jawaabta noocan ah waxaa badanaa lagu xisaabtamaa tijaabooyinka si loo qiimeeyo waxtarka daaweynta;
Waqtiga XnumXe, HBs ag wuxuu noqon karaa mid liita, taasoo u dhiganta daaweynta cagaarshowga B ee joogtada ah iyada oo aan halis ugu jirin in wax laga qabto. Jawaabta noocan ahi waa mid aad u dhif ah, marar dhaadheer, ka dib marka la joojiyo daaweynta. Waxaa intaa dheer, sida cagaarshowga C, hoos u dhac ku yimaada culeyska fayruuska ee bilowga daaweyntu waa saadaalinta jawaab ka sii wanaagsan.